Soludo ewepụtala ụlọ ọrụ ikuku oxygen dị nde narị naịra abụọ na Steeti Anambra. – Igbo Services
Tochukwu Ifejika, Mary Rose Onuigbo, KỌRỌ NA Bekee n' Awka
Soludo ewepụtala ụlọ ọrụ ikuku oxygen dị nde narị naịra abụọ na Anambra.
Gọvanọ Anambra steeti bụ Charles Soludo ewepụtala ụlọ ọrụ ikuku oxygen dị na Isiaku Nimo dị n’okpuru ọchịchị Njikoka nke steeti ahụ.
Oxygen a nke Isiaku Micro Finance Bank Nimo rụrụ bụ ọnụ ahịa ihe karịrị nde narị naịra abụọ wee rụọ ya iji jee ozi ma ụlọ ọgwụ nkeonwe yana nke ọha na steeti ahụ.
Dịka Soludo, onye Kọmishọna na-ahụ maka ahụike nọchitere anya ya, Dọkịnta Ben Obidike, ụlọ ọrụ a ga-ahụ na ha na-erube isi na ikuku oxygen dị n’ụlọ ọrụ ahụike ha.
“Arụmọrụ a bụ atụmatụ ma kwekọọ n’usoro ọchịchị na mmemme na ngalaba mmụta na ihe anyị nwere n’ala nke mere ka ọ bụrụ ụlọ ọrụ oxygen abụọ na steeti Anambra ka e mechara nke mbụ na Chukwuemeka Odumegwu Ojukwu University Teaching Hospital dị n’Awka.
“Nke a ga-enyere aka n’ịlụso nsogbu ahụike ọgụ na steeti ahụ yana dịka amụma gọọmentị steeti ebe a site n’ịduzi ụlọ ọgwụ niile nke onwe na nke ọha iji hụ na nnabata siri ike maka nnweta oxygen na ụlọ ọrụ ahụike ha.” o kwuru.
N’ikwu ya n’ụzọ ọzọ, onye bụbu kọmishọna na-ahụ maka ahụike ma bụrụkwa onye isi ụlọ ọgwụ na ụlọ ọgwụ nkuzi mahadum Ojukwu ugbu a bụ Dọkịnta Jeo Akabuike kwuru na steeti ahụ ka chọkwuru ụlọ ọrụ dị otú ahụ n’obodo ukwu ndị dị na mpaghara ahụ.
“N’ezie, anyị chọrọ ọtụtụ ụlọ ọrụ ndị dị otú ahụ na steeti ahụ na anyị chọrọ ma gọọmentị na ndị ọrụ nkeonwe na-ekere òkè na mpaghara nke inwekwu ikuku oxygen na steeti anyị n’ihi na oxygen bụ ndụ na nke a ga-enyere aka ijide ọnọdụ mberede ka ndị ọrụ ahụ wee nwee ike ijide ọnọdụ mberede. Akụkọ mbụ nke enweghị oxygen ga-abụ ihe gara aga, “ka ọ gbakwụnyere.
Chigo 294 posts 0 comments
Echiche CWC ga-eme ka usoro nkesa ọgwụ dị ọcha – PCN.
Red Cross na-enweta $350,000 iji mee ngwangwa ịgba ọgwụ mgbochi COVID-19.
Isiokwu dị mkpa249